China welding wocingo mveliso kunye nabathengisi | Ansheng
Welding wocingo lwenziwa ezikumgangatho ophezulu wire-carbon zentsimbi ezikhawulezayo, kusingathwa ngendlela oluzenzekelayo oluchanekileyo izixhobo ngoomatshini indawo iwelding, uze electro iqaqanjiswa eshushu-nkxu kwalenza, PVC kunye nezinye unyango umphezulu passivation kunye plasticization.
Izinto: Ucingo oluphantsi lwekharbon yentsimbi, ucingo olungenaentsimbi, njl.
Iindidi: Isefu yocingo oluhlabayo olwenziweyo, i-PVC iwelding wire mesh, iphaneli ye-welding panel, i-stainless steel welding wire mesh, njl.
Ukuluka kunye neempawu: kwalenza ngaphambi kokuluka, kwalenza emva kokuluka. Ineempawu anti-umhlwa eyomeleleyo, anti-igcwala, anti-ilanga, ukumelana yemozulu, isakhiwo umphezulu ngokuqinileyo, imveliso ekhawulezayo, intle kwaye iyasebenza, kunye nokuhamba lula.
Isicelo: Zininzi iindidi zentsimbi yocingo, esetyenziswa ngokubanzi.
1.Ingasetyenziswa kumzi mveliso, ukuthuthwa kwezolimo kunye neemveliso ezinxulumene namanzi, aquaculture, njl.
2.Ingasetyenziselwa ucingo lweentyatyambo, uthango oluphakathi, kunye nocingo lweofisi yasekhaya kunye nokuhombisa.
3. Icandelo lezokwakha ngokubanzi lisebenzisa umnatha wocingo oludityanisiweyo ukufakela udonga lwangaphandle kunye nokomeleza.
4.Welding wocingo inokusetyenziswa kwiivenkile ezinkulu, iishelfu zevenkile enkulu, imiboniso, njl.
Ukupakisha: iphepha elinomswakama ngokubanzi (umbala ubukhulu becala awumhlophe, mthubi, kunye nophawu lwentengiso, isatifikethi, njl. Njl. ukurola, abathengi bahlala becela ukuba benze iziQwengana kwaye bagged ukukhusela imikrwelo ebangelwe kukuthumela.
Egqithileyo Eyandisiweyo Metal wocingo
Okulandelayo: Epoxy Camera wocingo
Yenziwe ngentsimbi eshinyeneyo. Ucingo lwentsimbi engenazingcingo luyakunxiba, ukumelana nobushushu, ukumelana ne-asidi kunye nokumelana nomhlwa. Amanqanaba ahlukeneyo entsimbi engenasici asetyenziswa ngocingo. imitshato eyahlukeneyo isetyenziswa kwizicelo ezithile zokusebenzisa ipropathi eyahlukileyo. Sivelisa umnatha wocingo kwiindidi ezahlukeneyo zeefom. Ukuluka kumiselwe ngokweemfuno zabathengi, ezinje ngemathiriyeli, ubukhulu becala locingo, ubungakanani be-mesh, ububanzi kunye nobude ...